Maamulka Balcad: “Weerar ayaa nagu socda, maxaan ku samaynay Farmaajo iyo Kheyre? – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 On Dec 12, 2019
Maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa xaqiijiyey in Al-Shabaab ay xalay weerar culus ku qaadeen xerada ciidamada xoogga dalka ee Hiilweyne.
Maamulka waxa uu sidoo kale xaqiijiyey in xerada oo dhan ay gubaneyso isla markaana weerarkii ugu cuslaa ay Al-Shabaab ku soo qaadeen, waxayna dowladda ku eedeeyeen inay dayacday.
“Iyada oo daadad ay horay noo qaadeen ayaa Balcad waxaa lagu hayaa weerar. Xerada Hiilweyne waa ay gubaneysaa, rasaasna waa nagu socotaa. Goorma ayay dowladdeena garowsan doontaa rafaadkeena. Maxaan ku samaynay Farmaajo iyo Kheyre” ayaa lagu yiri qoraal guddoomiyaha degmada Balcad uu bartiisa twitter-ka soo dhigay.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab inta aysan weerarin xerada ay dileen shan qof oo rayid ah, oo ay ku jiraan laba haween ah, iyo kabtan ka tirsan ciidamada xoogga dalka, intaas kadibna ay weerar dhowr jiho ah ku ekeeyeen xerada Hiilweyne oo fariisin u eheyd cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka.
“Madaxweyne, illaa goorma ayaad iska indha tiri doontaa gowraca ku socda dadka Balcad. Ra’iisul wasaare, goorma ayaad soo toosi doontaa.” ayaa lagu yiri qoraalka maamulka Balcad.
Wararka aan laga helayo Balcad ayaa sheegaya in Shabaab ay gudaha u galay xerada Hiilweyne ayna gubeen gawaaridii militariga iyo teendhooyinkii ciidanka. Weli lama hayo khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarkaas.
Xerada Militeri ee Hiilweyne ayaa ku yaalla inta u dhaxeysa magaalooyinka Balcad iyo Muqdisho, waana markii ugu horeysay oo weerar nuucaan ah ay ku qaadaan Al-Shabaab, tan iyo markii laga saaray sanadkii 2012-kii.
Wasiir Sebriye oo sharaxaad ka bixiyey hanaanka loo soo xulayo xildhibaanada ka imaanaya Ahlu-Sunna